Iifayile ezili-10 zeDijithali eziFileyo Uthandana noMdlali - Impilo
Eyona Impilo Iifayile ezili-10 zeDijithali eziFileyo Uthandana noMdlali
Ukuba umntu ubeka iindonga ngokwamanani, ngokuqinisekileyo baya kubeka udonga lweemvakalelo.Inkundla yaseRecker / Unsplash
Imidiya yokuncokola ityhila okuninzi malunga nokukwazi ukuzibophelela komntu. Kumajelo eendaba ezentlalo anamhlanje alawula, ukuhambelana kwidijithali kubaluleke kakhulu njengokuhambelana kwihlabathi lokwenyani. Ke, xa ikwi ukuthandana indawo , jonga ezi ndawo zilishumi zibomvu zeendaba zentlalo.
# 1. Akayi kwamkela iifoto ezimakiwe nawe. Ukuba uye kwiintsuku ezingaphantsi kwesihlanu nomntu, kuyothusa ukuthumela ifoto ephawuliweyo yomntu othandana naye. Nangona kunjalo, ukuba ulupasile uphawu lwenyanga enye, kufuneka azive ekhululekile ngokwaneleyo ukuba angabonwa kwifoto ephawuliweyo kunye nawe. Ukuba akunjalo, inokuveza imiba emikhulu kakhulu. Mhlawumbi nina nobabini anikho kwiphepha elinye kwaye niyabona ubudlelwane ngokwahlukileyo. Kusenokwenzeka ukuba akabaxelelanga abahlobo bakhe kunye nosapho malunga nawe, okanye angabanobomi obahlukileyo kuFacebook awunonophelayo ngononophelo esebenzisa imiqobo yabucala. Ngelishwa, ukuba akafuni kubonwa kwifoto ephawuliweyo kunye nawe, akangoye lo ungenayo.
# 2. Uyala ukuthanda naziphi na izithuba zakho. Mhlawumbi unemigaqo-nkqubo engaqhelekanga malunga nokuthanda iifoto okanye umxholo wakho. Emva kokumba ngononophelo, uyaqaphela ukuba oku kuyinyani kwaye uyithandile kwaye wahlomla kwiifoto zabanye abantu. Ukuba akafuni ukuzibophelela ekuthandeni nantoni na oyiposayo, akafuni ukuzibophelela kuwe kwindawo enkulu-ixesha. Akunyanzelekanga ukuba abe liqela elikwi-intanethi kwaye ayithande yonke into oyenzayo, kodwa kufuneka ubuncinci athathe inqanaba elincinci lomdla kubomi bakho bedijithali. Ukuba wenza iingxelo ezingagqitywanga malunga nokungafuni ukuzibandakanya nomxholo wakho, baleka ngelixa usenakho.
# 3. Uyala ukunxibelelana nawe kumajelo athile eendaba ezentlalo. Ukuba unemicimbi yokuzibophelela, uya kukunika zonke iintlobo zezizathu zokuba kutheni engafuni ukunxibelelana nawe kwimidiya yoluntu. Ukwenza ukuba azamkele izicelo zakho kuya kuba ngumceli mngeni. Nika ingqalelo kwizinto amajelo onxibelelwano onxibelelana nawe ngazo. Umzekelo, ngaba ukhululekile ukuba ngumhlobo wakho kuFacebook, apho engakhange athumele uhlaziyo kwiminyaka emibini, kodwa ugcina iiakhawunti zakhe ezisebenzayo ze-Instagram kunye ne-Snapchat zabucala? Mhlawumbi ugcina uzivalele ngaphandle kohlaziyo lwangoku ngesizathu.
# 4. Akabikho kwi-Facebook messenger. Ngaba unxibelelane nawe kuFacebook kodwa akazange akuthumelele umyalezo kuFacebook kwi-messenger app? Le flegi enkulu ebomvu. Uyazi ukuba xa eqala ukuthumela umyalezo, uya kuba nakho ukubona ukuba wagqibela nini ukusebenza kwaye xa eyifundile imiyalezo yakho.
# 5. Ulandela iinkwenkwezi ezingamanyala kwi-Instagram. Ubonakala ngathi liphupha lizaliseka kwaye wabelana ngombono wakho wocingo olumhlophe lweepiki kwiindawo zokuhlala. Nangona kunjalo, xa ujonga uluhlu lwabafazi alandelayo kwi-Instagram, ubona uluhlu olude lweenkwenkwezi zoononophala kunye nesiqingatha se-20-into yamantombazana. Mhlawumbi onke amadoda alandela ezi ngxelo, kodwa indoda ekulungeleyo ukwenza into enzulu kusenokwenzeka ukuba ayithandi iifoto zamantombazana kwiibhikini yonke imini.
# 6. Khange acoce ukutya kwakhe . Emva kokuba unxibelelana naye kwimidiya yoluntu, naka ingqalelo kwiifoto zakhe ezimakishiweyo. Ngaba ucoce iifoto zedala lakhe ukuze enze indawo yedijithali yomntu omtsha? Okanye ngaba usenazo iifoto zakhe ezibaleka zisiya kutshona ilanga kunye neqabane langaphambili lothando? Umntu ofuna ubudlelwane akazukubhengeza ubudlelwane obudlulileyo kwimihla ezayo.
# 7. Akayi kuvuma ubudlelwane bakho ngamanani nangayiphi na indlela. Xa kuziwa kubudlelwane bakho obutsha, ungumoya. Ukuba akukho miqondiso yexesha lakho kunye, mhlawumbi ngenjongo. Kuyavunywa, amanye amadoda aya kuyenza ngokuthe chu le nto ixesha elide, kodwa ukuba akaguquki kubudlelwane bakho obungaveli kwi-intanethi, le yeyona flegi ibomvu ebomvu angajonganga nantoni na enzulu.
# 8. Akakufanisi ngokukhawuleza emva kokuqhagamshela. Ukuba ubunencoko emnandi nomfana odibene naye kuhlelo lokusebenza lokuthandana kwaye uqaphele ukuba awunakuthelekiswa nanto, uvaliwe okanye uphelelwe lixesha, nikela ingqalelo. Kungenzeka ukuba, ufuna ukuqhubeka nokuthetha nabantu abaninzi ngangokunokwenzeka, kwaye akafuni ukuba ubone ukuba usasebenza kwisiza inyanga okanye ezimbini ezantsi emgceni. Kananjalo akafuni ukuba ukwazi ukubona indawo akuyo xa ekulungele ukukwenza isiporho.
# 9. Utshintsha ukusuka ekuthumeleni imiyalezo kwi-Snapchat. Indoda enomdla wokuzibophelela iya kuba ilungile xa ikubhalela imiyalezo ngelixa ikwazi. Nangona kunjalo, ukuba umntu unomdla kwi-fling engaqhelekanga, uya kukutyhalela kwi-Snapchat kwaye abuze imifanekiso eyoyikisayo. Ilunge kangakanani. Imiyalezo kunye neefoto ziyanyamalala, ke akusayi kubakho mkhondo kwizicelo zakhe zeefoto. Ukuba unemvelaphi esemthethweni, uyazi kakuhle ukuba iSpapchat yindawo engcono yokucela le mifanekiso kunokuba usebenzisa iMessage. Uye walumkiswa.
# 10. Ucwangcisa amajelo eendaba ezentlalo. Umntu obahlula ubomi bakhe ulungile kakhulu ekuqinisekiseni ukuba iinkalo ezahlukeneyo zobomi bakhe azinqubani. Indlela entle yokubona ukuba uyincutshe ekwenziweni kwamacandelo-nto leyo ebangela zonke iintlobo zobudlelwane bexesha elizayo-kukunxibelelana naye kwi-LinkedIn. Oku kunokuziva ngathi kukuhamba ngenkani, kodwa ukuba uyakuthemba njengengcali, uya kuziva ekhululekile ukwamkela isicelo sakho kwaye angakhathazeki ukuba uza kufaka abo unxibelelana nabo. Nangona kunjalo, ukuba unengxaki yokwenza amashishini ahlukeneyo, isicelo sakho asisayi kwamkeleka kuba leyo yinxalenye yobomi bakhe ongasokuze uvunyelwe ungene kuyo.
Ukungakwazi ukunxibelelana Imidiya yokuncokola Ingabonisa ukungakwazi okukhulu ukunxibelelana nobomi bokwenyani. Ukuba umntu ubeka iindonga ngokwamanani, ngokuqinisekileyo baya kubeka udonga lweemvakalelo. Sebenzisa imithombo yeendaba kwezentlalo ukubona ezi flegi zibomvu kwaye uzigcinele ixesha namandla. Ekupheleni kosuku, khetha leyo ikhetha wena. Khetha lowo ufuna ukunxibelelana nawe, ongatyhaleli imida yakho yedijithali, okudibanisa kwihlabathi lakhe, kwaye ofuna ukuzibandakanya nobomi bakho kokubini kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi.
UKris Ruby yi-CEO yeRuby Media Group, ubuDlelwane boLuntu kunye Imidiya yokuncokola Iarhente. U-Kris Ruby uhlala esenza inkcazo nge-TV kwaye uthetha kwimidiya yoluntu, iindlela zobuchwephesha kunye nonxibelelwano lweengxaki. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela www.rradia.com okanye www.krrubibi.com
I-Real Ed Snowden yiPatsy, ubuqhetseba kunye nePrem elawulwa yiKremlin
'I-RuPaul's Drag Race All Stars' Ixesha le-2 yeNkulumbuso: Thumela kwiiClowns
Indlela uBernie afumana ngayo izinto kwiCongress ngaphandle kokuba athengwe
ndiyathemba ukuba le leta ikufumana uphilile
Inkonzo ebalaseleyo yokubhala isincoko
ezona ndawo zithandwayo zokuthandana ezineminyaka engama-50 ubudala
Iibhili zeebhili mit media lab
Ukubuyela umva kwifowuni ukukhangela simahla